(ထားမှ) "Poser" အတွက်ပြင်သစ်ကြိယာ conjugation Learn
"Poser" (ထားရန်) အတွက်ကြိယာ conjugation Learn
ပြင်သစ်တွင် "ခြင်း" ဟုများအတွက်တစ်ဦးကသင်ခန်းစာ
သင် "ချပြီးနေကြတယ်" သို့မဟုတ်တစ်နေရာရာမှာပွငျသစျထဲတွင်တစ်ခုခု "ထားခဲ့ဘူး" ဟုပြောလိုသောအခါ, သင်ကြိယာ poser ကိုသုံးပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာသင်စကားပြောဆိုမှုအတွက်အဘို့များစွာသောအသုံးပြုမှုကိုတွေ့လိမ့်မည်စကားလုံးတစ်လုံးရဲ့, ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့လေ့လာဖို့ကောင်းတစ်စိတ်ကူးင် အများအပြား conjugation ။ ဒီပြင်သစ်သင်ခန်းစာများ၏ဘာသာရပ်ဖြစ်ပါသည်။
Poser ၏အခြေခံ conjugation
ပြင်သစ်ကျောင်းသားများကို poser တစ်ဦးဖြစ်တယ်ဆိုတာသိရန်ပျော်ရွှင်ပါလိမ့်မည် er ကြိယာ - ပုံမှန်အစည်းအဝေး ။ ဒါကအဲဒီမှာသူ့ရဲ့ conjugation မရှိအထူးလှည့်ကွက်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်သင်ဒီတစ်ခုဆင်တူကြိယာကနေလေ့လာသင်ယူသောအရာကိုလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်ဆိုလိုသည်။
မည်သည့် conjugation နှင့်အတူရည်မှန်းချက်ဝါကျအဘို့အသဘာဝကျပါတယ်တဲ့စကားလုံးသည်သဒ္ဒါနည်းမှန်ကန်သောပုံစံသို့ကြိယာအသွင်ပြောင်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကအရေးယူရပျကို ယူ. အဘယ်သူလုပ်ခဲ့တယ်သည့်အခါဆိုလိုဖို့ရည်ရွယ်သည်။ သောကြိယာကို stem (သို့မဟုတ်အစွန်းရောက်) မှနောက်ဆုံးတွင်အမျိုးမျိုးထည့်သွင်းခြင်းဖြင့်ပြုသောအမှုဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါဖမ်းပြင်သစ်သင်သည်အသီးအသီးတင်းမာနေအတွင်းရှိသမျှသောဘာသာရပ်အသစ်တစ်ခုပုံစံပေးသည်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။
ငါတို့သည်သင်တို့အခြေခံပစ္စုပ္ပန်, အနာဂတ်နှင့်မစုံလငျအတိတ်တင်းမာနေများအတွက်အများဆုံးမကြာခဏအသုံးပြုလိမ့်မည်ဖြစ်သောပြစိတ်ဓါတ်များနှင့်အတူစတင်ပါလိမ့်မယ်။ poser များ၏အစွန်းရောက် pos- သည်နှင့်သင်ဇယားအတွက်သင့်လျော်သောဇာတ်သိမ်းရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ ဥပမာတစ်ခုအဖြစ်, je နည်းလမ်းများရှိုး "ငါသည်ချပြီးငါ" နှင့် nous posions "ကျနော်တို့ထားခဲ့ပါဘူး။ " ကိုဆိုလိုသည်
ရပ်နေဟန် poserai posais
ရပ်နေဟန် poseras posais
ရပ်နေဟန် posera posait
posons poserons posions
posez poserez posiez
posent poseront posaient
အဆိုပါ အများကိန်း poser ၏ posant ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာရိုးရှင်းစွာအစွန်းရောက်ဖို့ -ant ထည့်သွင်းခြင်းဖြင့်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။
တင်းမာနေပြင်သစ်အတိတ်အဘို့, သင်မစုံလငျပါသို့မဟုတ်အကြား option ရှိသည် Pass တေးရေးဆရာ ။ အဆုံးစွန်သော၏ပစ္စုပ္ပန်တင်းမာနေ conjugation လိုအပ်သည်တစ်ဦးဝင်းဖြစ်ပါတယ် avoir နှင့် အတိတ် participle pose ။ ဒါဟာသင်ထိုကဲ့သို့သော "ငါသည်ထားခဲ့ပါဘူး" နှင့်အဘို့အ nous Avon pose များအတွက် j'ai pose အဖြစ် phrases ပေးသည် "ကျနော်တို့ထားခဲ့ပါဘူး။ "
Poser ပိုရိုးရှင်းသော conjugation
အဆိုပါ subjunctive ချပြီး၏လုပ်ရပ်မသေချာမရေရာသည့်အခါအသုံးပြုသည်။ အဆိုပါခြွင်းချက် တစ်ခုခုအချို့သောအခြေအနေများတွေ့ဆုံခဲ့ကြသည်သာလြှငျတစ်နေရာရာမှာထားမည်ဟုဆိုသည်။ အခါသမယတွင်, သငျသညျမြားကိုလညျးသုံးနိုင်ပါသည် အဆိုပါ Pass ရိုးရှင်းတဲ့ သို့မဟုတ် ယင်းမစုံလငျ subjunctive ဤကြိယာ၏စာပေပုံစံများဖြစ်ကြသကဲ့သို့သငျပွငျသစျထဲတွင်အများကြီးစာဖတ်ခြင်းသို့မဟုတ်အရေးအသားပြုပါ, အထူးသဖြင့်လျှင်, အ။
ရပ်နေဟန် poserais posai posasse
ရပ်နေဟန် poserais posas posasses
ရပ်နေဟန် poserait posa posât
posions poserions posâmes posassions
posiez poseriez posâtes posassiez
posent poseraient posèrent posassent
poser ကဲ့သို့ကြိယာများအတွက်အသုံးဝင်သော, ပြင်သစ်အလွန်အရေးကြီးသည် ကိုသင်မှနျကွောငျးဝနျခံသောနှင့်အမှတ်ဖြစ်ဖို့လိုတဲ့အခါမကြာခဏအသုံးပြုသည်။ မှတ်မိဖို့အဓိကအရာက tu ရှိုးထက် pose သုံးပြီးဘာသာရပ်နာမ်စား drop မှအဆင်ပြေမယ့်ဖြစ်ပါတယ်။
ပြင်သစ် 101: နှုတ်ကပတ်တော် "Kif-Kif" Learn
ပွငျသစျထဲတွင် (ရေချိုးဖို့) "တုံ" Conjugate လုပ်နည်း
အဆိုပါတွေမှာ Passive တင်းမာနေအတွက်အီတလီကြိယာ Conjugating
Camille Va Nager: လွယ်ကူအဘိဓါန်ပွငျသစျအင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားနှစ်မျိုးပုံပြင်
ဂျာမန်တစ်ဦးအနည်းငယ် '' Hundekommandos '(ခွေး Commands) Learn
Install လုပ်နည်း - - virtual Tree ကြည့်ရန် Delphi 3rd Party ကို Open Source စိတျအပိုငျး
Anzick ခလိုဗစ်၏ဆိုက်ကို - Montana, USA တွင်ခလိုဗစ်၏ကာလသင်္ဂြိုဟ်
ယားရေကူးကန်အဖွဲ့ချုပ် - ပရဒိသုခုနှစ်တွင် Trouble?
စပိန်ကြိယာ '' Pasar '' အသုံးပြုခြင်း
Polonium အချက်အလက် - Element ကို 84 သို့မဟုတ်ဖိုး
Osmotic Pressure ဖိအားနဲ့လုပ်သူများ
Worms 1521 များ၏အစားအသောက်: ဧကရာဇ်နှင့်အတူလူသာ Square ဟာ Off
နွေဦးအကြောင်း 16 Funny လက်ဆင့်ကမ်းယဉ်ကျေးမှု
ဘယ်လို Apatosaurus ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သလော
တက္ကဆက်တော်လှန်ရေး: အ Alamo ၏တိုက်ပွဲ
အဆိုပါ Visigoths နှင့်အေဒီ 410 ခုနှစ်တွင်ရောမမြို့၏အိတ်ဝတွင် Alaric ရှငျဘုရငျ
Indiana ပြည်နယ်ကောလိပ်များသို့ဝင်ရောက်ခြင်းများအတွက် ACT ရမှတ်နှိုင်းယှဉ်